Bike Light Factory - China Bike Light ထုတ်လုပ်သူများ၊ တင်သွင်းသူများ
Neck Brace ပံ့ပိုးမှု
ပေါင်နှင့် ခြေသလုံးကြွက်သားများကို ဆွဲဆန့်ပါ။
Waist Brace ပံ့ပိုးမှု
အိမ်သုံး သန့်ရှင်းရေး မျက်နှာသုတ်ပုဝါ
အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးအတွက် ဒူးစွပ်...
2022 ခေတ်စားသော ဘက်စုံသုံး လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်...
3 IN 1 Collapsible Outdoor...
Sublimation Printed Dainty...
Outdoor အလုပ် Light Strong L...
အရောင်းရဆုံး Mini Silicone L...
LED ရှေ့လက်ကိုင်ဘားဆိုင်ကယ် Li...
Super Bright ဝက်ဝံစက်ဘီး L...
7 Led စက်ဘီးရှေ့မီးစက်ဘီး...
ကြိုးမဲ့လေဆာနောက်မီးလမ်းညွှန်ညွှန်ပြချက် USB အားသွင်းစက်ဘီးဘေးကင်းရေး LED သတိပေးချက်2လေဆာရောင်ခြည်တန်းစက်ဘီးစက်ဘီးနောက်မီး B20
Smart Intelligent Cycling Lamp USB စက်ဘီးနောက်ဘရိတ်မီးများ Fahrradlicht Led ကွေ့အချက်ပြစက်ဘီးနောက်မီး Bike Tail Light
Smart Intelligent စက်ဘီးလေဆာ နောက်မီးများ စက်ဘီးဘရိတ်မီး USB Fahrradlicht Led လှည့်အချက်ပြစက်ဘီးနောက်မီး Bike Tail Light B20
ကုန်ပစ္စည်းအမည် Bicycle Tail Light မူရင်းနေရာ China Brand AUKELLY မော်ဒယ်နံပါတ် B20 Mounting placement Seatpost Color Black Type LED Light Battery 3.7V 650MAH အားပြန်သွင်းနိုင်သော Li-ion ဘက်ထရီ ပါဝါ SUPPLUY ဘက်ထရီ Controller Size 5.5*2CM Certification CE, FCC, ROHS Light Body size 7.5*5.5 *2CM မီးအိမ်ကိုယ်ထည်ပစ္စည်း ABS Controller ဘက်ထရီ 1*CR2032 ဘက်ထရီ အလင်းအလုပ်လုပ်ချိန် 10 နာရီ တည်နေရာ နောက်မီး IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် IP55 မုဒ် အနိမ့်၊ အလယ်၊ အမြင့်၊ Strobe ထောက်ပံ့နိုင်မှု- 300000 Piece/Piec...
6000LM 2Xm L2 Led စက်ဘီးရှေ့မီး စက်ဘီးရှေ့မီး ပါဝါအလင်းတန်း 200m အားပြန်သွင်းနိုင်သော ရေစိုခံ စက်ဘီးစီးမီးများ lumigrids ဆိုင်ကယ်အလင်း B200
1. Four Modes Ajustable
2. ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် အသေးစားဒီဇိုင်း
4. Good Vision-200 မီတာ အလင်းတန်း
7 LED စက်ဘီး စက်ဘီးကွေ့ မီးချောင်း အချက်ပြ လမ်းညွှန် ဘရိတ်တိုင် မီး 8 အသံ ချိုချို ပုံသေ တောင်တပ်ဆင် သတ်မှတ်စက်ဝန်း ဘေးကင်းရေး သတိပေး ဓာတ်မီး B97
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် တည်နေရာ- နောက်မီးအမျိုးအစား- LEDs၊ B97 ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- ထိုင်ခုံတိုင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE ROHS မူရင်းနေရာ- တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B97 အရောင်-အနက်ရောင် ကုန်ပစ္စည်းအမည်- စက်ဘီးကွေ့ မီးအိမ်အရွယ်အစား: 9.8* 6.4*3.8cm ပါဝါရင်းမြစ်- 2*AA ဘက်ထရီ(မပါဝင်) အဓိကစကားလုံးများ- စက်ဘီးခေါင်းမီး Lumens: 300 lumens လုပ်ဆောင်ချက်-3မုဒ် သတ်မှတ်ချက်- ရေစိုခံ/မီးလောင်မှု/ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အင်္ဂါရပ်- B...
USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော အလူမီနီယမ်စက်ဘီး ရှေ့မီး5ဂီယာ သတိပေးချက် ပြင်းထန်သော ဆိုင်ကယ်ညမီးများ B204
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် တည်နေရာ- ရှေ့မီး ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- လက်ကိုင်ဘား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE, Rohs, FCC မူရင်းနေရာ- တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B204 အမည်- စက်ဘီးညမီးများ ပစ္စည်း- အလူမီနီယမ် အလွိုင်း+ABS အရောင်- အနက်ရောင် ရေစိုခံ : IPX5 အရွယ်အစား : 7.5*2.1*4.3cm အလေးချိန် : 180g အကွာအဝေး : 300-400 အားသွင်း : USB အားသွင်း Lumens : 350lm OEM : Acceptaple အမျိုးအစား : LED ပံ့ပိုးမှု စွမ်းရည် ပံ့ပိုးမှု စွမ်းရည် : 300000...
ကြိုးမဲ့အဝေးထိန်းလေဆာစက်ဘီးနောက်မီးလမ်းညွှန်ညွှန်ပြချက် USB အားသွင်းအလှည့်အချက်ပြများဘေးကင်းလုံခြုံရေးသတိပေးစက်ဘီးနောက်မီးအလင်း B20
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် ရာထူး- နောက်မီး အမျိုးအစား- စက်ဘီး မီးအလင်းရောင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု- USB တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- ထိုင်ခုံတိုင် လက်မှတ်: CE,FCC, RoHS မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: AUKELLY မော်ဒယ်နံပါတ်: B20 ကုန်ပစ္စည်းအမည်- စက်ဘီးနောက်မီး အရွယ်အစား: 71*58 * 30mm LED : 64LED ရေစိုခံ : IPX6 အားသွင်းခြင်း : USB လိုင်း အသုံးပြုမှု : စခန်းချခြင်း၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အပြေးခြင်း ၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စသည်တို့ ပါဝါထောက်ပံ့မှု : 650mAh Li-ion ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်သော ဘက်ထရီ အရောင် : အနက်ရောင် ပစ္စည်း : ABS လေဆာရောင်ခြည် :2ထောက်ပံ့မှု စွမ်းရည် ထောက်ပံ့မှု စွမ်းရည် : 300 ။ .။
သံလိုက်နှစ်ထပ် လျှပ်ကူးနည်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့် တောင်တက်စက်ဘီးညတွင် စီးနင်းသည့်အလင်းရောင် Cycle LED သတိပေးချက် ဘက်ထရီမပါသည့် စက်ဘီးဒိုင်နမိုမီး B203 သတ်မှတ်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- နောက်မီး အမျိုးအစား- LED ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- လက်ကိုင်ဘား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE, Rohs, FCC မူရင်းနေရာ: Zhejiang, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B203 အမည်: စက်ဘီးဒိုင်နမို အလင်းအစုံ ပစ္စည်း: ABS အရောင် : Black Light source :2XPE အနီရောင် LED Lumens : 240lm Size : 5*4.9*4cm Weight : 125g Charge : Magnetic induction self-generation Waterproof : IP54 OEM : Acceptaple Packa...
လက်ကားစျေးပေါရောင်စုံစီလီကွန်စက်ဘီးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ LED ဆီလီကွန်နောက်မီးခွက်စက်ဘီးစီးခြင်းဘေးကင်းရေးရေစိုခံစက်ဘီး Tail Light B2
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် ရာထူး- ရှေ့/နောက်/ဘောင် အမျိုးအစား- စက်ဘီးအလင်း ပါဝါထောက်ပံ့မှု:2* AG10 ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- ဖရိမ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE FCC ROHS မူရင်းနေရာ: တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B2 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: ဆိုင်ကယ်နောက်မီး : ဆီလီကွန်အင်္ဂါရပ်- အနီရောင်/အဖြူ/အပြာ အလင်းအထွက်- 150 lumens လုပ်ဆောင်ချက်- ၎င်းကို ရေထဲတွင် နှစ်မြှုပ်ထားနိုင်သည် ပါဝါအရင်းအမြစ်-2* AG10 ဘက်ထရီ အရောင်: ရောင်စုံအသုံးပြုမှု: စက်ဘီးအလင်း ပြီးပြည့်စုံသော MOQ:...
စက်ဘီးရှေ့မီး LED ရှေ့မီး နောက်ဘီးစက်ဘီး Flash မီးလက်ကိုင်ဘား ရေစိုခံ စက်ဘီးစီးရောင်စုံ ဆီလီကွန် LED စက်ဘီးမီး B2
အကျဉ်းချုပ် အမြန်အသေးစိတ် တပ်ဆင်ခြင်းနေရာ-ဘောင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE FCC ROHS မူရင်းနေရာ- တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B2 ပစ္စည်း: ဆီလီကွန်ဘက်ထရီ: 2*CR2032 ထူးခြားချက်- လက်ဘား/အနောက်/ဘီးများတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်မှု- ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုများ LED အရောင် : အနီ အဝါ အပြာ အစိမ်း အဖြူ အမျိုးအစား : စက်ဘီးမီး ထောက်ပံ့နိုင်မှု : တစ်လလျှင် 300000 Piece/Pieces ဆီလီကွန် LED စက်ဘီးမီး ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ထုပ်ပိုးခြင်းအသေးစိတ် စီလီကွန် LED စက်ဘီးမီး ထုပ်ပိုးခြင်း : Sin packing2C...
Outdoor Multicolor Sport4Colour Beam တောင်လမ်း Flash Tyre Tyre Lights Valve Pair Cycling Led Wheel မီးလုံး စက်ဘီးပြောသောအလင်း B50
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- ရှေ့မီး အမျိုးအစား- LEDs ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ဘက်ထရီတပ်ဆင်ခြင်း နေရာ-ဘောင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE ROHS မူရင်းနေရာ: CHINA အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B50 ကုန်ပစ္စည်းအမည်- စက်ဘီး စကားပြောအလင်း အရောင်- အနီ၊ အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်း၊ အလေးချိန်- 0.015KG ပစ္စည်း- သတ္တု/ပလပ်စတစ် ဆားဗစ်- ဒိုင်နိုက်ကင်းစင်သော အလင်းထုတ်လွှတ်သည့် ဆားကစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ဘက်ထရီ- 3*AG10 အင်္ဂါရပ်- ဂေဟစနစ်-သဟဇာတ/တာရှည်ခံ လေထုအတွက် သင့်လျော်သော...
ရေစိုခံ စက်ဘီးစီးမီး ပါ၀င်သော ဘက်ထရီ ရှေ့မီး ရှေ့မီးနှင့် နောက်မီးများ စက်ဘီးမီးများ usb led အားပြန်သွင်းနိုင်သော Mount Bike Light set B3-6
အကျဉ်းချုပ် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- ရှေ့မီး နောက်မီး အမျိုးအစား- အယ်လ်အီးဒီ ပါဝါထောက်ပံ့မှု- USB တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ-ဘောင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE,FCC,RoHS မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: AUKELLY မော်ဒယ်နံပါတ်: B3-6 အရောင်- အနက်ရောင် +အနီရောင် ကုန်ပစ္စည်းအမည် : စက်ဘီးမီးများ USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော အဓိကစကားလုံးများ သတ်မှတ်ပါ- စက်ဘီးမီး အရွယ်အစား- 105*33*90mm(လက်ကိုင်ဘား 20-31mm) အလေးချိန်- 237g အင်္ဂါရပ်- ဆိုင်ကယ်အလင်း လုပ်ဆောင်ချက်- 4MODES အမြင့်-အလတ်-အနိမ့်-စထရိုဘီ...
USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော ရှေ့နောက်စက်ဘီးအလင်း လီသီယမ်ဘက်ထရီ စက်ဘီးနောက်မီး စက်ဘီးစီးဦးထုပ်မီး 1000 lumens LED Mountain Bike Light B7
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- ရှေ့၊ နောက်၊ ထိုင်ခုံတိုင်၊ လက်ကိုင်ဘား၊ စသည်တို့။အမျိုးအစား- LEDs ပါဝါထောက်ပံ့မှု- USB အားသွင်းတပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- လက်ကိုင်ဘား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE၊ RoHS မူရင်းနေရာ- တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: AUKELLY မော်ဒယ်နံပါတ်: B7 ထုတ်ကုန်အမည်- LED တောင်တက်စက်ဘီး မီးအလင်းရောင်- LED နှစ်ထပ် အရောင်- အနီ/အဖြူ အပြာရောင် /single အနီရောင်ပစ္စည်း- သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေသော PC ဘက်ထရီ: 500 mAh အလုပ်ချိန်- 4-5 နာရီ LED: တင်သွင်းထားသော COB bead လုပ်ဆောင်ချက်- ...
MTB စက်ဘီးရှေ့နောက်မီး အစုံ de luz de bicicleta စက်ဘီးဘောင်ခေါင်းမီး နောက်မီး ရှေ့မီး usb အားပြန်သွင်းနိုင်သောစက်ဘီးမီးအစုံ B3-4
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- ရှေ့+နောက် အမျိုးအစား- စက်ဘီး မီးအလင်းရောင် ပါဝါထောက်ပံ့မှု- တပ်ဆင်ထားသော လီသီယမ် ဘက်ထရီ တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- ဖရိမ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE FCC ROHS မူရင်းနေရာ- တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်- Aukelly မော်ဒယ် နံပါတ်: B3-4 ကုန်ပစ္စည်း အမည်- usb အားပြန်သွင်းနိုင်သော စက်ဘီး အလင်းအစုံ ပစ္စည်း- ABS အင်္ဂါရပ်- 360 ဒီဂရီ ထောင့်ချိုး ချိန်ညှိနိုင်သော အားသွင်းမှု- USB အားပြန်သွင်းနိုင်သော တောက်ပမှု- 300 Lumens ပါဝါ အရင်းအမြစ်- XPE အသုံးပြုမှု- ပြင်ပ အားကစား လုပ်ဆောင်ချက်- အားအပြည့်သွင်းနိုင်သော အပြာရောင်...
2000 lumens စက်ဘီးမီးများ ရေစိုခံ စက်ဘီးမီးရှူးမီး MTB လမ်းပေါ်တွင် စီးနင်းနိုင်သော USB အားသွင်းနိုင်သော LED စက်ဘီးရှေ့ခေါင်းမီး B26
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် အနေအထား- ရှေ့မီး အမျိုးအစား: LEDs တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- လက်ကိုင်ဘား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE,FCC,RoHS မူရင်းနေရာ: တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်: AUKELLY မော်ဒယ်နံပါတ်: B26 ထုတ်ကုန်အမည်: LED စက်ဘီး ရှေ့ဦးခေါင်းအလင်း ပစ္စည်း: အလူမီနီယမ် အရောင်: အနက်ရောင် ဘက်ထရီ: 6000mAh အရွယ်အစား- 105*50*26MM အလေးချိန်- 244G မုဒ်- 4modes (High>Mid>Low>Strobe) ရေစိုခံ: IP65 (မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအောက်တွင်) သော့ချက်စာလုံး- အားပြန်သွင်းနိုင်သော ပြင်ပ Led စက်ဘီးအလင်း MO...
ရေစိုခံ သံလိုက်မဟုတ်သော ဘက္ထရီ ကိုယ်တိုင်သုံး စက်ဘီး LED နောက်မီး Bike night lights B220
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် တည်နေရာ- နောက်မီး အမျိုးအစား- LED ပါဝါထောက်ပံ့မှု- ကိုယ်တိုင်စွမ်းအင်သုံး တပ်ဆင်ခြင်း နေရာ- ထိုင်ခုံတိုင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE, Rohs, FCC မူရင်းနေရာ- တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အမည်- Aukelly မော်ဒယ်နံပါတ်: B220 ပစ္စည်းအမည်- B220 အရောင်- RED အရွယ်အစား: 55.5* 35.5*28mm အားသွင်းခြင်း- ကိုယ်တိုင်စွမ်းအင်သုံး အင်္ဂါရပ် 2- သံလိုက်နှစ်ထပ်၊ အားကောင်းသော သံလိုက်ဓာတ်အားသွင်းခြင်း။ထောက်ပံ့မှုစွမ်းရည် ပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည်- တစ်လလျှင် 300000 Piece/Pieces စက်ဘီးညမီးများ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် Bike night lights pack...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၂၈
လိပ်စာ- အခန်း ၂၀၀၇၊ အမှတ် A8၊ ဇုံ A၊ Konggang International Headquarters Base၊ Dongli ခရိုင်၊ Tianjin၊ China
Whatsapp- +86 13312068990